The US Dollar Is Now Worthless - Why Are You Still Holding It? - crypto လမ်းညွှန်
နေအိမ် သတင်း The US Dollar Is Now Worthless – Why Are You Still Holding It?
Village Idiot ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 2, 2021 တွင် 3:44 ညနေ
Bryan C L X T ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 2, 2021 တွင် 3:47 ညနေ
Supa VIRAL Collectibles ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 3, 2021 တွင် 3:24 နံနက်
မတ်လ 2, 2021 တွင် 3:46 ညနေ
မတ်လ 2, 2021 တွင် 4:34 ညနေ
မတ်လ 2, 2021 တွင် 4:37 ညနေ
The Sovereign Stoic ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 2, 2021 တွင် 5:08 ညနေ
Darkwing Duck ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 2, 2021 တွင် 5:20 ညနေ
Corey An Investor ကပြောပါတယ်:
MM crypto ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 2, 2021 တွင် 4:55 ညနေ
S V ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 2, 2021 တွင် 5:26 ညနေ
Michael Parnell ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 2, 2021 တွင် 3:51 ညနေ
trapped cat ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 2, 2021 တွင် 4:27 ညနေ
မတ်လ 2, 2021 တွင် 4:50 ညနေ
Junior Ducatel ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 2, 2021 တွင် 4:52 ညနေ
or you can getamath wallet and stake for 20% ဟားဟား
မတ်လ 2, 2021 တွင် 5:39 ညနေ
Dollar cost Backpacker ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 2, 2021 တွင် 8:19 ညနေ
Peter Emanuel Roos ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 2, 2021 တွင် 3:54 ညနေ
Sneakerz On Deck ကပြောပါတယ်:
Marco Darko ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 2, 2021 တွင် 6:12 ညနေ
မတ်လ 2, 2021 တွင် 4:00 ညနေ
မတ်လ 2, 2021 တွင် 4:28 ညနေ
မတ်လ 2, 2021 တွင် 5:09 ညနေ
မတ်လ 2, 2021 တွင် 4:01 ညနေ
မတ်လ 2, 2021 တွင် 4:49 ညနေ
မတ်လ 2, 2021 တွင် 4:53 ညနေ
Jason Bouck ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 2, 2021 တွင် 5:48 ညနေ
မတ်လ 3, 2021 တွင် 2:13 နံနက်
မတ်လ 2, 2021 တွင် 4:04 ညနေ
မတ်လ 2, 2021 တွင် 4:07 ညနေ
မတ်လ 2, 2021 တွင် 11:43 ညနေ
Mr. Speyside ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 2, 2021 တွင် 4:26 ညနေ
D K ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 2, 2021 တွင် 5:23 ညနေ
မတ်လ 2, 2021 တွင် 6:48 ညနေ
မတ်လ 2, 2021 တွင် 8:20 ညနေ
Rich Johnson ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 3, 2021 တွင် 12:52 နံနက်
Still Bill ကပြောပါတယ်:
Loki Jordan ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 2, 2021 တွင် 7:40 ညနေ
Jason Medeiros ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 2, 2021 တွင် 8:17 ညနေ
မတ်လ 3, 2021 တွင် 2:11 နံနက်
မတ်လ 3, 2021 တွင် 4:03 နံနက်
မတ်လ 2, 2021 တွင် 5:17 ညနေ
Krewline 210 ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 2, 2021 တွင် 10:16 ညနေ
Psychedelic Love ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 3, 2021 တွင် 2:09 နံနက်
မတ်လ 2, 2021 တွင် 5:30 ညနေ
Ten Pound Sterling! (T£N!) ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 2, 2021 တွင် 5:43 ညနေ
Marco Martins ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 2, 2021 တွင် 5:55 ညနေ
မတ်လ 2, 2021 တွင် 8:46 ညနေ
MR. OBVIOUS ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 3, 2021 တွင် 12:29 နံနက်
Patrick Batemam ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 3, 2021 တွင် 2:17 နံနက်
Kitsune Siberian Forest Cats ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 3, 2021 တွင် 4:02 နံနက်
D M ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 3, 2021 တွင် 6:05 နံနက်
Riskier, ဟုတ်ကဲ့, but the return percentages are higher as indicated in the video. Scared money don’t make money.
Yodzan Mh ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 3, 2021 တွင် 8:03 နံနက်
Edrick Mangum ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 3, 2021 တွင် 3:32 နံနက်
Luiz Andre ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 3, 2021 တွင် 4:18 နံနက်
Dr George Melden ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 3, 2021 တွင် 4:24 နံနက်
Julie Nolke ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 3, 2021 တွင် 4:27 နံနက်
Big Owls ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 3, 2021 တွင် 4:33 နံနက်
Its Prime ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 3, 2021 တွင် 4:43 နံနက်
Rosie Erin ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 3, 2021 တွင် 5:18 နံနက်
Gurren agan ကပြောပါတယ်:
Wolga Sarıtas ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 3, 2021 တွင် 5:19 နံနက်
Victor Hugo ကပြောပါတယ်:
Matthew Kenneth ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 3, 2021 တွင် 5:29 နံနက်
Jordan Helmic ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 3, 2021 တွင် 5:48 နံနက်
Max Talks ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 3, 2021 တွင် 5:54 နံနက်
Cynthia Angela ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 3, 2021 တွင် 5:58 နံနက်
Michael James ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 3, 2021 တွင် 6:04 နံနက်
Sofia Sanchez ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 3, 2021 တွင် 5:50 နံနက်
Smith Hall ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 3, 2021 တွင် 5:53 နံနက်
Margaret George ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 3, 2021 တွင် 5:55 နံနက်
John Norman ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 3, 2021 တွင် 6:18 နံနက်
Lisa McCarthy ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 3, 2021 တွင် 6:21 နံနက်
Billy White ကပြောပါတယ်:
မတ်လ 3, 2021 တွင် 6:22 နံနက်